मोटरसाइकल काधमा बोकेर हिँडेको यो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल, ठाउँ कहाँ हो चिन्नुस् ? – Taja Khawar
मोटरसाइकल काधमा बोकेर हिँडेको यो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल, ठाउँ कहाँ हो चिन्नुस् ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १२, २०७८ समय: २:३०:०५
बाहुबली स्टाइलमा’ मोटरसाइकल बोकेर हिँडेको यो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल, ठाउँ कहाँ हो चिन्नुस् ?
एजेन्सी । सामाजिक मिडियामा यो भिडियोले धेरैलाई छक्क पारेको छ । एक जना मानिस टाउकोमा बाइक लिएर अघि बढिरहेको छ। यो भिडियोमा यो स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ कि त्यस मान्छेको एक छेउमा पहाड छ, अर्कोतिर नदि । यस्तो अवस्थामा मोटरसाइकल टाउकोमा उठाइरहेको छ, व्यक्तिले ठूलो ध्यान दिएर हरेक कदम चाल्दैछ।
यो भिडियो कहाँ को हो भन्ने कुरा भने खुलेको छैन । तर यो इन्टरनेट को धेरै प्लेटफार्महरु मा भाइरल गरीरहेको छ। यो भिडियो सार्वजनिक गर्ने ब्यक्तिले लेखेका छन्, की युवतीहरु यहाँ पानी परेको छ त्यसैले निकै हिलो छ । आफ्नो घुम्ने योजना रद्द गर्नुहोस् । यो भिडियो समाचार लेख्ने समयसम्म २९ हजार ६ सय भन्दा बढीले हेरिसकेका थिए ।
तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा मान्छे उसको टाउकोमा बाइक लिएर हिंडिरहेको छ। सडक माटो र चट्टानले भरिएको छ। यस्तो अवस्थामा बाइक चलाउनुको सट्टा, व्यक्तिले टाउकोमा उठाएर हिँडेको देखिन्छ । कोहीले बाहुबली फिल्मको लोकप्रिय शीर्षक धिभरा लाई यो कठिन अवस्थासँग जोडेर प्रतिकृया दिएका छन् ।
Last Updated on: July 27th, 2021 at 2:30 am